China AI-Germ-egbu ndị robots AIStrike Manufacture na Factory | Emeela
AI Germ-egbu Robots AIStrike
1) Pulsestrike 360 ​​pulsed xenon ìhè
2) Otutu puku oge kariri oriọna B2ltraviolet mercury ochie, na ekpuchi otutu uzo ogwu (200-315nm)
3) Oru oma, environmentally friendly, ngwa ngwa (ruo 5 nkeji)
4) Redus disinfection nwere ike iru 3 mita, na-egbu nnukwu anụ dị ka CRE, VRE na MRSA na nkeji
5) Ọ dịghị emebi akụrụngwa na akụrụngwa kpatara ọkụ oyi, dị njikere iji
6) Ọ bụ ihe na-egbu egbu na-akpata ọrịa. Ọ dịghị pathogen nwere ọgụ ka ike pulsed ìhè
7) akpaka igodo, akpaka mgbochi ayi, akpaka disinfection, akpaka recharging
Achọrọ M Ahịa
(Intelligent pulsed ìhè disinfection robot) AIStrike oru oke
1) Jiri usoro anụ ahụ iji mee ihe.
2) Pulse xenon lamp, ncha ọkụ arc ogologo ≥370 mm, ngbanye ọkụ ugboro 2 Hz, sistemụ na-achọpụta akpaghị aka
Ndụ tube, jiri oke.
3) Onu ogugu na ihapu ikike nke ike oku di nde ≥50 million, sistemu a choputara onwe ya na steeti ikike hapu ma na echetara ha ka ha dochie ikike ha kubie ume.
4) Nchaji mpịakọta input voltaji: 220V / 50HZ, mmepụta voltaji: 48V15A.
5) nwoke ịga ụlọ ọcha ihe, zuru-wavelength usu ìhè oyi 200-1100nm gụnyere 200nm-315nm
Wave band ultraviolet, pulsed ultraviolet na wavelength nke 250nm-280nm (na 1 mita) ike ≥60000uw / ​​cm2.
6) Ọnụ ọgụgụ igbu egbu nke Acinetobacter baumannii AB-CR mgbe nkeji 5 nke irradiation bụ ≥99.9%,
Mgbe nkeji ise nke irradiation, ọnụ ọgụgụ igbu ọchụ nke Candida albicans bụ ≥99.9%,
7) Ọnụọgụ nke MRSA ≥99.9% mgbe ọ gbasịrị otu teknụzụ na otu usoro ngwaahịa maka nkeji 5 (3 mita)
Ọnwụ nke Pseudomonas aeruginosa mgbe nkeji 5 nke irradiation (na 3 mita) bụ ≥99.9%.
8) Ọnụ ọgụgụ nke Klebsiella pneumoniae ≥99.9% mgbe ọ gbasịrị otu teknụzụ na otu usoro ngwaahịa maka nkeji 5 (na 3 mita),
Ọnwụ igbu egbu nke Acinetobacter baumannii ≥99.9% mgbe irradiation maka nkeji 5 (na 3 mita),
Ọnụ ọgụgụ nke nje bacteria na-egbu mgbe nkeji 5 nke irradiation (na 3 mita) bụ ≥99.7%.
9) Enwere ike ịtọ oge disinfection na minit 5-10, okirikiri disinfection abụghị ihe na-erughị 3 mita, na ọrụ disinfection countdown nwere ike ịtọ dịka ogo nke ihe disinfection na ụlọ ahụ; enwere ike ịtọ oge na-agụta ọnụ;
10) Oriọna oriọna na-akpaghị aka welitere na lowered, na-eweli ọrịa strok bụghị ihe na-erughị 50CM. A na-eji akwa tube quartz enwetara dị elu mee ihe maka ọgwụ disinfection na sterilization dị elu. A na-eji elu nke ozone filter decomposition n'elu iji kwadebe ma nyochaa ozone.
11) A na-eji aluminom na-abanye na mbara igwe iji mepụta akụkụ ntụgharị. Ngosiputa nke enyo nke enyo nke alumini bu ≥90%, nke na eme ka ike nke ìhè ghaputara n'èzí.
12) Usoro ahụ dị njikere iji. Mgbe ọrụ gachara, ozone ịta ahụhụ bụ ≤0.1mg / m³ (a na-enye akụkọ nyocha), na enweghị mmebi nke gburugburu ebe obibi dịka akụrụngwa, plastik metal, windo mgbidi, ákwà ngebichi, wdg.
13) 7-inch smart capacitive touch screen, sọftụwia nke ihuenyo mmetụ nwere ọrụ nke ncheta mmecha disinfection, na-ebuli oriọna, na-agbada oriọna, na-amalite na-egbu maramara, na-akwụsị ikpu ọkụ, ntọala usoro, ntọala ntọala na bọtịnụ ọrụ ndị ọzọ. Ọrụ njikwa ọgụgụ isi, nsuso na-akpaghị aka nke usoro disinfection, ndekọ ndekọ akpaka nke data dị mkpa nke disinfection ọ bụla, sistemụ na-anakọta data nke usoro modul ọ bụla, ma nwee ọrụ mkpuchi na-akpaghị aka. Igwe ikuku na-enweghị eriri nwere otu ọrụ dị ka ihuenyo mmetụ isi.
14) Ọ nwere ọrụ nke nyocha na ịchekwa map na-akpaghị aka, igodo akpaka, recharging akpaka, izere ihe mgbochi akpaka, mkpu akpaka na ọrụ ndị ọzọ, na-enweghị ntinye aka, akpaka disinfection.
15) Iji laser nyocha modulu, igwefoto igwefoto 3D abụọ na radar ultrasonic, izere ihe mgbochi akpaka na igodo akpaka.
14) Site na iji ọgụgụ isi eme ihe, ị nwere ike ịnweta ngwanrọ njikwa igwe ojii nwere ọgụgụ isi iji ghọta nlekota nke ọnọdụ igwe, ndekọ data, ajụjụ, traceability na ọrụ ndị ọzọ.
15) Onye nrụpụta agafeela asambodo SIO9001, otu ngwaahịa teknụzụ ahụ agafeela asambodo CE, otu ngwaahịa teknụzụ nwere akwụkwọ nyocha ọhụụ, yana otu teknụzụ ngwaahịa nwere asambodo patent.
16) Otu teknụzụ ngwaahịa ahụ na-enye ndepụta ọrụ nke ụlọ ọgwụ ụlọ 10 dị n'elu ọkwa A.
.Dị Ultrasonic Sterilization equipments
Aha Akara DONEAX
Nọmba nlereanya AIStrike
Nhazi ngwá ọrụ Klas nke Abụọ
Mgbe erechara ya Online oru nkwado
Ngwa Ngwaọrụ Ahụike Ọgwụ
Oge disinfection 5-10Oge
Egbukepụ aak ogologo ≥370mm
Redus Disinfection ọ bụghị ihe na-erughị 3 mita
Mbuli oriọna nke oriọna ọ bụghị ihe na-erughị 50CM
Ozone ịta mgbe ọrụ ≤0.1mg / cubic mita
smart capacitive ihuenyo mmetụ 7 anụ ọhịa
Ndụ oriọna 4 nde ugboro
Nha ịbụ 115kg
1) Akpaaka igodo: Site na usoro ngwụcha zuru ezu, mgbe etinyere mpaghara disinfection, akụrụngwa na-abata ebe njedebe autonomously;
2) Izere igbochi akpaka: Mgbe ị na-ezute ihe mgbochi, akụrụngwa ga-ezere ya n'onwe ya, mee atụmatụ ụzọ ọhụrụ, wee rute mpaghara disinfection;
3) Ntughari aka na aka: Mgbe batrị ezughi oke, ngwaọrụ ahụ ga-alaghachi na akpaghị aka na-akwụ ụgwọ maka ịgba ụgwọ;
4) Intelligin disinfection: Banye Ward maka disinfection dị ka atụmatụ ahụ, na ndị ọrụ ahụike adịghị mkpa ịbanye na ngalaba ahụ ozugbo, na-ezere ịrịa ọrịa obe.
AI Pulsed Light Germ-egbu Roboti
1) Short disinfection time: 5 nkeji nke disinfection oge, multiple wards nwere ike disinfected ụbọchị ọ bụla;
2) Werger sterilization: radius sterilization nwere ike iru 3m, ìhè gosipụtara na nzacha nzacha nwere ike ịkọwa ọkụ na kọntaktị ugboro ugboro, ma jiri aka mee ka ebe ndị a na-eleghara anya dị mfe, nke nwere ike wepu ụmụ nje karịa nke ọma na nke ọma;
3) stmị nwoke zuru oke: ultra-band pulsed ultraviolet (200-315nm) na disinfection zuru ezu na teknụzụ ọgbụgba nwere ike igbu nje na nje na-eguzogide ọgwụ;
4) Ọrụ dị mma: igwe ojii nwere ọgụgụ isi ngwanrọ njikwa usoro, dị njikere iji;
5) Nchedo gburugburu ebe obibi ma na-adịgide adịgide: enweghị mmebi na disinfection, enweghị ihe mmiri ọgwụ, enweghị ihe mgbochi na-emerụ ahụ.
Aha Ọnụ ọgụgụ
Nọrọ n'ụlọ ya 1 setịpụrụ
Xenon oriọna 1 ibe
Anti-UV iko 2 ụzọ abụọ
Mbadamba ụrọ PC 1epe
Robot isi ngwanrọ 1 set gụnyere na igwe niile
Nchaji ikpo 1 setịpụrụ
Udọ ike 1epe
Phillips sikruuokwomedi 1epe
Osote: Mobile Germ-egbu Robots PulseIn-D
Disinfection Machine N'ihi Hospital
Ọgwụ ụlọ ọgwụ
Nlekọta Ọgwụ Hospital
Akụrụngwa ụlọ ọgwụ
Slọ ọgwụ ụlọ ọgwụ UV Trolley
Ọrịa Sterilizer Ọrịa
Lọ Ọgwụ Uv Sterilizer
Ọgụgụ Disinfection Robot
Pulsed Ultraviolet Disinfection Robot.Ọkpụkpụ
Pulsed Xenon UV Oriọna
Pulsed Xenon UV Rọbọtị
Pulsed Xenon UV usoro
Pulsed Xenon Uvd Rọbọtị
Rolọ akwụkwọ Robot Disinfection
Igwe Sterilizer Maka Hospitallọ Ọgwụ
Ultraviolet Disinfection Robot. Ọkpụkpọ
Ultraviolet Sterilization igwe
Uv Disinfection Oriọna N'ihi Hospital
Uv Disinfection oriọna Robot
Uche Disinfection Robot
Vlọ Ọgwụ Ugbo Ala Uv Light
Uv Ọgwụ Disinfection Robot
Ugboro atọ 360
Uv Sterilizer Ikuku
Hospitallọ ọgwụ Sterilizer Uv
Uvc ụlọ ọgwụ Robot
Mobile ikuku laminar eruba igwe AirH-Y4000H
Ugbo elu nke ikuku Irradiation UV Oriọna AirH-B100
Houselọ nkwakọba ihe na akụrụngwa disinfection
Mobile ikuku laminar eruba igwe AirH-Y2000H
Mobile Air ọcha Disinfector AirH-Y1000H
Ultrasonic nyocha sterilizer PBD-S3